29 martsa teto Mahajanga: ny tantara tsy fanadino hoy ireo Bekotromaroholatra | Région Boeny
Fitoam-pivavahana iraisam-pinoana tao amin’ny EKAR Mahabibo, nanandratana vavaka ho an’ny Tanindrazana, fametrahana fehezam-bonikazo teo anoloan’ny 29 martsa 1947 teo Mahabibo. Fampiratiana ireo sary mirakitra tantara nialohavana hira sy tonokalo manindrahindra ny fitiavan-tanindrazana ary fandefasana horonan-tsary, tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina Mahajanga, nampitamberina ireo ady natrehan’ireo mpitolona mahery fo.
Ireo no hetsika notanterahana teto andrenivohitr’I Boeny nankalazana ny faha-69 taona nitsingerenan’ny tolom-panafahana 29 martsa 1947, ny talata lasa teo.
Nanome voninahitra ny lanonana rehetra teto Mahajanga, ny Filoha lefitry ny an-tenimieran-doholona, ny iray amin’ireo solombavam-bahoaka voafidy teto Mahajanga, ny Minisi-panjakana Rakotovao Rivo ary ireo manam-pahefana eto an-toerana, anisan’izany ny lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Araka ny fitantaran’ireo vavolombelona telo sisa eto Mahajanga, izay anisan’ireo niaina ny ady tamin’izany fotoana, dia tsy nitsitsy aina ireo mpitolona mba hananan’ny taranak’izy ireo ny fahaleovantena. Ankehitriny anefa hoy izy ireo toa tsy misy vidiny ny rà latsaka tamin’izany raha mandinika ny manjo firenena sy ny vahoaka Malagasy izahay.
Na dia ny fampanajana sy ny fanatrehana ny lanonan’ny 29 martsa fotsiny aza hoy izy ireo, dia tsy maro amintsika Malagasy ankehitriny no manao izany. Isan-taona dia ireo olom-panjakana sy miaramila ihany no tonga maro manatontosa izany, ankoatra ireo mpino vitsivitsy, sy ireo be antitra. Tsy misy, hoy ihany izy ireo, ezaka na dia kely akory aza, avy eny anivon’ny fokontany, na seham-panabezana isan-tsokajiny mampiditra sy mandetika anatin’ny sain’ny ankizy sy ny tanora hoe sarobidy amin-tsika io daty io satria vaky lain’ny Fahafahana, ary rà sy aina Malagasy latsaka no vidiny.
Hafatr’ireo Bekotromaroholatra nanao tononkalo tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina Mahajanga nandritra ny lanonana ny hoe: Ny olombelona mandalo, ny tantara tsy fanadino, Tiavo ny Tanindrazanao, arovy sy vimbino.